Movies Archives - Page7of 57 - Popular
လတ်တလောမှာ နေမင်းကတော့ ဇာတ်ကားတွေမရိုက်ဖြစ်ဘဲ စီးပွားရေးအနေနဲ့ အစ်ကိုဖြစ်သူရဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ မြန်မာဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကို ပရိသတ်တွေအင်နဲ့အားနဲ့ အားပေးမှုပိုများနေတဲ့အတွက် . . .
ရန်အောင်ဆိုတာ အောင်မြင်မှုရရှိပြီး၊ အောင်မြင်ဆဲ ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးတစ်လက်ပါ။ အချစ်၊ အမုန်း၊ အလွမ်း၊ အဆွေး၊ ဖိုက်တင် ဘာပဲလာလာ ကာရိုက်တာမျိုးစုံကို အံဝင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ သူ့ကို ချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေက အများကြီး။ အကယ်ဒမီရွှေစင်ရုပ်တုတွေလည်း များစွာပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။ ရန်အောင်နဲ့ တွေ့ဖြစ်တော့…
ဇာတ် သိမ်းခမ်းမှာ တစ်ရှူးဘူးဘေးချပြီး ဒီဇာတ်လမ်းတိုကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် တောင် တစ်ရှူးတွေလုံလောက်မယ် မထင်ပါဘူး။ ကြည့်ရမယ့်သူတွေ သရုပ်ဆောင်တွေတော့မသိဘူး။ ကိုယ်တိုင်ခဏလေး...
ရိုက်ထားတာနည်းနည်းကြာပေမယ့် ဇာတ်ကားကြည့်နေရင်းနဲ့ ပြီးသွား လို့ပြီးသွား မှန်းမသိအောင် စိတ်ဝင် စားဖို့ကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ။ အခုမြန်မာ့ရုပ်ရှင်မှာက ဇာတ်ကား ကောင်းတွေ တအားပေါက်နေတဲ့အ ချိန်မှာ...
ဒီဇာတ်ကားမှာ ပြေတီဦး၊ မိုးအောင်ရင်၊ ရဲအောင်၊ ခိုင်သင်းကြည်၊ တက္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံ၊ ဗေလုဝ၊ အရိုင်း နှင့် သရုပ်ဆောင် များစွာပါဝင်ထားပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကတော့ ပရိသတ်တွေ ရယ်မောပျော်ရွှင်မှု ရသတွေ ရစေမယ့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ။ ဒီဇာတ်ကားမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးမှုနဲ့ ထောင်…
နေမျိုးအောင်က ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေ အများဆုံးရိုက်ကူးခဲ့ပြီး နယ်ပရိသတ်တွေ အခိုင်အမာရရှိခဲ့သူပါ။ အခုအချိန်မှာ ဗီဒီယိုဈေးကွက်ပျက်သွားတဲ့အတွက် နယ်ပရိသတ်တွေ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားအသစ်တွေတော့ မကြည့်ရတော့ပေမယ့် ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ရိုက်ကူးနေပါတယ်လို့ ဆိုတဲ့ နေမျိုးအောင်က . . .
“ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများမှာလည်း သူ့နိုင်ငံရဲ့ ကမ္ဘာကျော်အနုပညာရှင်တွေက G-SHOCK ရဲ့ Brand Ambassador အဖြစ်တာဝန်ယူနေကြတာဖြစ်သလို မြန်မာနိုင်ငံအတွက် . . .
ဇာတ်ဝင် တေးခုနစ်ပုဒ်ပါဝင်မယ့် ‘နောင်တွင်ဥဒါန်းတွင်စေသတည်း’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား
''ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားက လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ဝ နှစ်ကျော်က မန္တလေးဆေးတက္ကသိုလ် မှာပြဇာတ်အဖြစ်ကပြခဲ့တာကို ရုပ် ရှင်အဖြစ်ပြန်လည်ဇာတ်ညွန်းရေး သားက ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာပဲဖြစ် ပါတယ်။ ဒီထဲမှာက ဆရာဝန်တစ် ယောက်ရဲ့သစ္စာတင်မဟုတ်ဘူးပေါ့ ဗျာ။ နိုင်ငံအတွက် လူမှုဘဝတွေ အတွက်ပါ...
ဒါရိုက်တာစတီးလ်တို့နဲ့ မိသားစု တွေလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက် တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ ထွန်းကိုကိုက ဆိုပါတယ်။ 'ဦးစတီးလ်နဲ့ အဖွဲ့တွေကတော့ ကျွန်တော်နဲ့မိ သားစုတွေလိုပါပဲ။ ဇာတ်ကားရိုက်တိုင်း အမြဲတမ်းဆုံတွေ့နေကျ။ ကျွန်တော့်ကို ကျားနဲ့ဆင်ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်ဖို့ကမ်းလှမ်းသေးတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း....